Samachar Batika || News from Nepal » साप्ताहिक राशिफल हेर्नुहोस् २०७६ माघ (आईतबार १२ देखी शनिबार १८ सम्म) राधे!राधे !!ॐ
साप्ताहिक राशिफल हेर्नुहोस् २०७६ माघ (आईतबार १२ देखी शनिबार १८ सम्म) राधे!राधे !!ॐ
प्रारम्भमा मनग्य आम्दानी भए पनि तत्काल खर्च बढ्नाले अर्थ अभाव देखा पर्ला। बेलामा होस नपुर्याउँदा चुनौती पनि आउलान्। तापनि मिहिनेतले स्थितिमा सुधार आउनेछ। केही दौडधुप गर्नुपरे पनि अवसर प्राप्त हुनेछ। बुधवारदेखि भोजभतेरको निम्तो आउन सक्छ। स्वास्थ्य कमजोर हुनेहरूले खानपानमा सजग रहनुहोला। सुन्दर पहिरनले व्यक्तित्व निखार्नेछ भने बोलीको माध्यमले धेरैलाई मन्त्रमुग्ध बनाउन सकिनेछ। मेहनत गर्दा पहिले रोकिएको प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। मान-सम्मानका साथै उपहार प्राप्त हुनेछ
पहिलो दिन खर्चिलो देखिए पनि मिहिनेतले प्रतिष्ठित काम गर्ने मौका दिलाउनेछ। रमाइलो जमघटका बीच स्वादिष्ट खानपानको आनन्द प्राप्त हुनेछ। मानसम्मान प्राप्त भए पनि वादविवादमा परिने सम्भावना देखिएकाले सजग रहनुहोला। सत्कर्ममा जुट्नेहरूलाई बोलीको भरमा काम बन्न सक्छ। हिम्मत गर्दा जटिल काम समेत सम्पादन हुनेछ। काममा अभिप्रेरित गर्नेहरू प्रशस्तै भेटिनेछन्। प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्न सकिनेछ। सप्ताहान्तमा साझेदारीमा समस्या आउनाले पहिलेको सम्झौता भंग हुन सक्छ।
पहिलो दिन रमाइलो रहनेछ भने बोलीको प्रभावले मनग्य फाइदा उठाउन सकिनेछ। तर्कशक्ति बढ्नेछ भने अध्ययनमा प्रगति हुनेछ। दिगो फाइदा हुने काम सुरु हुनेछ। प्रयत्न गर्दा सजिलै लक्ष्य प्राप्ति हुनेछ। बुद्धिको उपयोगले प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई वशमा ल्याउन सकिनेछ। मेहनतीहरूलाई समयले पनि साथ दिनेछ। तर अरूको मात्र भरले मनोकांक्षा पूरा नहुन सक्छ। टाढिएका आफन्तहरू नजिकिनेछन्। तर आफ्नैबाट धोका पनि हुनेछ। सप्ताहान्तमा आफ्ना महत्त्वपूर्ण योजना सार्वजनिक नगर्नुहोला
प्रयत्न गर्दा ठूलै उपलब्धि हातलागी हुनेछ, त्यसैले विवादबाट टाढा रहनुहोला। सञ्चित कर्मफल प्राप्त हुनाले नयाँ काम सुरु हुनेछ। शुभचिन्तकहरूले साथ दिनाले चिताएका काम सजिलै बन्नेछन्। सोम, मंगल र बुधवार भने घरायसी समस्याले अल्झाउन सक्छ। अनावश्यक साइनो गाँस्नेहरूबाट सतर्क रहनुहोला। समयमा जुट्न नसक्दा काममा बाधा पर्नेछ। तापनि सप्ताहान्तमा परिस्थिति अनुकूल बन्नेछ। सामाजिक कार्यले सम्मानित स्थान दिलाउनेछ। अध्ययनमा प्रगति हुनेछ। मेहनतले फाइदा दिलाउनेछ।
मेसो नपाउँदा सुरुमा अलमल भए पनि मिहिनेतले काम बन्नेछ। प्रतिद्वन्द्वीहरू पछि पर्नेछन्, आम्दानी बढ्नेछ। प्रयत्न गर्दा दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ हुनेछ। लामो तथा रमाइलो यात्राको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। भौतिक साधन जुट्नुका साथै दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ हुन सक्छ। विशेष अवसरले जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ। अतिथिका रूपमा मान-सम्मान प्राप्त हुनेछ। तर सुरुमा हौसिनाले अर्थक्षय हुन सक्छ। सप्ताहान्तमा स्वास्थ्यबाधा, काममा अवरोध र केही झमेला आइपर्ने सम्भावना छ ।
प्रारम्भ उपलब्धिकारक रहनेछ भने चिताएको काम पनि बन्नेछ। मिहिनेतले जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सकिनेछ। पुरुषार्थी काम बन्नाले जोश–जाँगर बढ्नेछ। प्रियजनसँग रमाइलो भेटघाट हुनुका साथै आतिथ्यपूर्ण सम्मान प्राप्त हुनेछ। बुध, विही र शुक्रवार भने अस्वस्थताको योग देखिएकाले खानपानमा सजग रहनुहोला। अनायासै कामको बोझ थपिन सक्छ। अर्थ अभावले पनि काम रोकिन सक्छ। तर सप्ताहान्तमा स्थितिमा सुध्रनाले भाग्यले साथ दिनेछ। दिगो कामले भविष्यप्रति आशा जगाउनेछ।
मेसो नपाउँदा सुरुमा अलमल भए पनि मिहिनेतले काम बन्नेछ। प्रतिद्वन्द्वीहरू पछि पर्नेछन्, आम्दानी बढ्नेछ। प्रयत्न गर्दा दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ हुनेछ। लामो तथा रमाइलो यात्राको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। भौतिक साधन जुट्नुका साथै दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ हुन सक्छ। विशेष अवसरले जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ। अतिथिका रूपमा मान-सम्मान प्राप्त हुनेछ। तर बेसुरमा हौसिनाले अर्थक्षय हुन सक्छ। सप्ताहान्तमा स्वास्थ्यबाधा, काममा अवरोध र केही झमेला आइपर्ने सम्भावना छ
सुरुको दिन उत्साहपूर्ण रहे पनि घरेलु समस्या सुल्झाउन जुट्नुपर्ला। शुभचिन्तकहरूलाई बेवास्ता गर्दा अलि दु:ख पाइनेछ। बुद्धिको उपयोगले काम लिने प्रयत्न गर्नुहोला। बुधवारदेखि स्थितिमा क्रमश: सुधार आउनेछ। प्रयत्न गर्दा हिम्मतले काम बन्नेछ, अनुभवले ज्ञान बढ्नेछ भने मेहनतले आम्दानीको दिगो स्रोत जुटाउन सकिनेछ। प्रतिपक्षीहरू समेत सहयोगी बन्नेछन्। कामको उच्च मूल्यांकन हुनाले विभिन्न अवसर समेत पाइनेछ। रोकिएका काम बन्नेछन्। सप्ताहान्तमा भने आफन्तसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
सुरुको दिन रमाइलो रहे पनि पूर्वार्ध केही खर्चिलो रहनेछ। स्वास्थ्य पनि कमजोर रहनेछ। अवसरवादीहरूले आफ्ना कमजोरीको फाइदा उठाउने चेष्टा गर्नेछन्। काम बिग्रने डरले सताउन सक्छ। बुधवारदेखि स्थितिमा सुधार आउनेछ। सानो प्रयत्नले काम बन्नेछ भने अवसरले उत्साह जगाउनेछ। सुखदुःखमा साथ दिनेहरू प्रशस्तै फेला पर्नेछन्। रोकिएको काम बन्नुका साथै नयाँ काम सुरु हुनेछ। तारिफयोग्य काम गर्दै लोकप्रियता हासिल गर्न सकिनेछ
सुरुमा जिम्मेवारी बढ्नेछ तर काम बिग्रने चिन्ताले सताउन सक्छ। अरूका काममा जुट्नुपरे पनि सोमवारदेखि आध्यात्मिक ज्ञानले दुर्भावनाका तरंगहरू समाप्त हुनेछन्। मंगलवारसम्म अवरोध झेल्नुपरे पनि उत्तरार्धमा नयाँ कामतर्फ अग्रसर भइनेछ। प्रतिष्ठित व्यक्तिसँगको सहकार्यले फाइदा दिलाउनेछ। पुराना कामको चर्चा हुनेछ भने उपलब्धिको स्रोत प्राप्त हुनेछ। व्यवसायमा मनग्य आम्दानी हुनेछ। सप्ताहान्तमा खर्चको मात्रा पनि बढ्नेछ। आफ्नो लाभांश अरूका हातमा जानाले समस्या आइपर्न सक्छ
सुरुमा व्यवधान देखिए पनि प्रयत्न गर्दा चिताएको काम सम्पादन हुनेछ। धेरैको विश्वास जित्न सकिनेछ। कामको सन्दर्भमा विशिष्ट व्यक्तिहरू समेत नजिकिएलान्। नाम, दाम र इनाम हातपार्ने समय छ। दिगो आम्दानी हुने काम सुरु गर्ने मौका छ। बीचमा आफ्नो लाभांश अरूले हत्याउने चेष्टा गर्नेछन्, सजग रहनुहोला। आफन्तबाट टाढिनुपरे पनि टाढाका साथीभाइ नजिकिन सक्छन्। अवसरका लागि केही दौडधुप गर्नुपरे पनि मेहनतको प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। केही खर्च लागे पनि यात्राको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
प्रारम्भमा काम बन्नुका साथै प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह जगाउनेछ। आम्दानीका नयाँ स्रोत फेला पर्नेछन्। तापनि अर्थ अभाव कायम रहनेछ। समयमा रकम हातलागी नहुँदा काममा पनि समस्या पर्नेछ। खर्चको मात्रा बढ्नेछ भने एउटै कामलाई दोहोर्याएर प्रयत्न गर्नुपर्ला। साथीभाइ समयमा नजुट्नाले पनि दुःख पाइनेछ। शुक्रवारदेखि विभिन्न अवसर जुट्नुका साथै मनमा आनन्द मिल्नेछ। पारिवारिक भेटघाटका बीच स्वादिष्ट भोजनमा मन रमाउनेछ। आँटेको काम बन्नेछ भने मेहनत गर्दा मनग्य आर्जन हुनेछ।
प्रकाशित मिति १२ माघ २०७६, आईतवार ०२:३६